Inona no atao hoe cnc? | PTJ hardware inc.
Hotline: +86 0769 82886112 Blog FAQ Video
Fitaovana vy mandeha ho azy
Lisitry ny fitaovana
Fividianana lanja tanteraka
Home > Services > CNC fikosoham-bary
INONA NO ATAO VOAFETRA?
Ny fikosohan'i CNC, ao anatin'izany ny fikosoham-bary, dia a machining cnc dingana ampiasaina amin'ny milina ampahany prismatic.
Ny fanapahana fikosoham-bary miaraka amin'ny lohan'ny fanapahana varingarina sy lozika marobe dia matetika antsoina hoe milina famaranana na fikosoham-bary izay azo afindra amin'ny famaky samihafa ho an'ny milina tery tery, lalan-drano, faritra ivelany, sns.,
Ny milina fanaovana milina dia antsoina hoe milina fitotoam-bary. Ny milina fikosoham-bary matetika dia ivon-toeram-pamokarana fehezin'ny index, ary ny fikosoham-bary dia atao ao amin'ny fivarotana masinina.
Machines Milling Metal Services(aliminioma ▲)
Nandritra ny folo taona, PTJ Hardware dia mpitarika any Sina amin'ny lohalaharana amin'ny teknolojia
fampiasana ny rafitra fanamboarana farany hanolorana vy tsy misy fangarony sy
serivisy fanodinana aliminioma.
Machining plastika (uhmw▲)
PTJ Hardware dia manolotra milina plastika mafy sy fanamboarana ho an'ny indostria
fampiharana. Ny mpiasan'ny PTJ dia manana faritra fanodinana traikefa miavaka amin'ny fampiasana
UHMW, ary afaka milina sy mamorona ampahany mazava tsara mifanaraka amin'ny famaritana marina anao.
Fandeferana mihodina amin'ny CNC?
Ny fandeferana ankapobeny ho an'ny milina CNC ny metaly dia ny DIN-2768-1-tsara ary ho an'ny plastika, DIN-2768-1-medium. Ny fandeferana dia misy fiantraikany lehibe amin'ny ampahany géomètriany sy karazana fitaovana. Ireo mpitantana ny tetikasanay dia hifampidinika aminao amin'ny lafiny rehetra amin'ny tetikasanao ary hikatsaka hanome ny ambaratonga avo indrindra araka izay azo atao.
Betsaka ny mpanjifanay no manome ny sarin'izy ireo manokana, fa raha tsy manana ny anao ianao dia azonay atao ny mandray ny hevitray ary mamadika azy ireo ho ampahany mampiasa ny fahaizanay CAD / CAM ao an-trano..
Maninona no mifidy serivisy fanodinana PTJ CNCs?
famokarana - Ny foibe fanodinana PTJ anio dia mamokatra ampahany amin'ny tahiry fisotroana mandritry ny famaky ny famaky 14. Ny fitaovan'ny milina misy lahasa miasa marobe dia manao ampahany kely mahomby amin'ny habetsahana kely sy kely. Raha mila fanazavana fanampiny manan-danja kokoa, jereo ny lisitry ny fitaovana fenoinay.
Fahaiza-manao CAD / CAM- Faritra maro amin'ny dingam-pamokarana fikosoham-bary, manomboka amin'ny famoronana jig ka hatramin'ny vokatra vita vita amin'ny milina fanodinananay CNC, dia tarihin'ny rafitra ERP izay manome toky fa azo antoka ny famolavolana geometry be pitsiny.
javatra iray - Ny portfolio PTJ an'ny serivisy fanodinana cnc dia misy singa vita amin'ny karazana fitaovana CNC maro; ao anatin'izany ny aliminioma, titanium, vy vy, varahina ary metaly sy plastika hafa, hihaona amin'ny filan'ny mpanjifa manokana amin'ny aerospace, automotive, medikaly, elektronika ary maro hafa.
FAMPIANARANA AMIN'NY TRANO AMIN'IZAY CNC
Ny finamanan'ny PTJ amin'ireo mpanjifa erak'izao tontolo izao tao anatin'ny folo taona lasa
PTJ dia nanompo ny mpanjifa eran'izao tontolo izao hatramin'ny 2007. Manohy mizara ny fahaizanay izahay ary manatsara ny fitaovanay hahazoana antoka fa afa-po ny mpanjifanay. Manana mpanjifa mahatoky be dia be izahay izay niara-niasa taminay nandritra ny 10 taona mahery.
Andao jerena ny horonan-tsary ary hianaranao bebe kokoa momba ny PTJ Hardware.
● Cnc machining kojakoja fiara
● Cnc milina elektronika
● Fizarana fiaramanidina Cnc Machining
● Cnc milina fizarana fitsaboana
● Mianara antsipiriany bebe kokoa momba Masinina saha
Valiny ao anatin'ny 24 ora
Hotline: + 86-769-88033280 E-mail: sales@pintejin.com
Azafady, apetraho ny rakitra mba hafindra ao amin'ilay lahatahiry sy ZIP na RAR alohan'ny hametahana azy. Ny firaketana lehibe kokoa dia mety maharitra minitra vitsy mba hamindrana arakaraka ny hafainganam-pandehan'ny Internet eo an-toerana :) Ho an'ny miraiki-poza 20MB, kitiho WeTransfer ary alefa any sales@pintejin.com.
Azafady, avelao handeha ity saha ity.
Vantany vao feno ny saha rehetra dia afaka mandefa ny hafatrao / rakitrao :)
Raiso ny teny nindramina
Fankatoavana ny mpanjifa
Copyright © Dongguan PTJ Hardware Products Co., Ltd. Zo rehetra voatokana.